Inkampani iphrofayela - Zhejiang Aijiren Technology Co., Ltd
1-4mL Autosampler ngeZitsha Ukuze HPLC, UPLC, GC
16mm, 25mm Test Tube Ukuze Water Ukuhlaziywa cod, FTU
6-20mL GC HEADSPACE ngeZitsha
8-60mL Epa Isitoreji ngeZitsha
HPLC isipetu Hlunga
Zhejiang Aijiren Technology, Inc iyinhlangano umphakeli global zokuphila-isayensi, i-chemistry, okudlekayo laboratory, njll Imikhiqizo yethu emikhulu, ekhona ezweni ukusebenza high liquid chromatography & igesi chromatography okudlekayo ezifana chromatography Autosampler ngeZitsha nge ukuvalwa, ifaka, crimper nesipetu izihlungi, njll; ukuhlaziywa Water okudlekayo ezifana COD test tube.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. ziye kokunikeza zithunyelwe emazweni angaphezu kuka-70, ihlanganisa ezingaphezu kuka-2000 amakhasimende emhlabeni wonke. abasebenzi 120, 100,000 ekilasini yokuhlanza ikamelo, ISO, GMP & Bureau Veritas isitifiketi, lena indlela sigcina izinga okusezingeni namanani ukuncintisana amakhasimende zenani global.
Isiko ibhizinisi "Quality lokuqala, futhi ukunikeza ephelele." ukukhuthaza I Aijiren ukuhambisa njalonjalo, futhi ukusekela I Aijiren ukubambisana nabafowethu futhi innovation.It kuyinto ukuzibophezela ibhizinisi lethu, ezithemba ukufinyelela kuso ukunikeza imikhiqizo high kanye ezinhle kumakhasimende ethu. "Ngokuqhubekayo asathuthuka imikhiqizo emisha ukwanelisa izidingo abasebenzisi" Umgomo wethu oyinhloko. Inkampani yethu uzimisele ukuhlola emakethe enkulukazi China namazwe angaphandle, futhi bafune ukuthuthukiswa ezivamile emkhakheni olusha lomsebenzi. amaphesenti angu-70 imikhiqizo zidayiswa Europe gasket emakethe United States. Through iminyaka engaphezu kweyishumi yentuthuko kanye nemizamo, ukushintshana kanye ne eziningi zesayensi nobuchwepheshe neminyango ekhaya aphesheya, thina waphumelela izinhlobo ezahlukene autosampler izitsha eziyisikhombisa esetshenziswa ngokukhethekile ngo laboratory kanye nokuhlaziywa umkhakha. Singahlinzeka zenzelwa laboratory okudlekayo imikhiqizo izinga okusezingeni amakhasimende emhlabeni wonke, okungase kukusize anqobe izinselele kusengaphambili lapho wenza ucwaningo egunjini lokucwaninga esibhedlela.
kusengaphambili kuyinkolelo yokuthi kanye mission of Aijiren, futhi kuyisisekelo indlela yokuthuthuka kwethu.
Siyakwamukela ukuvakashela futhi sibambisane!